Efa 35 taona zao no niadiana ny hisian'ny fanaovana politika malalaka, ny fahafahana miteny sy maneho hevitra ankahalalahana, maro no nijoro niady tamin'izany censure gazety sy ny fangejan'ny minisitry ny atitany Ampy Portos tamin'ny andron'i Filoha Ratsiraka, napetraka ireny fanaraha-maso ny fifidianana sy fahafahan'ny rehetra milatsaka ho fidiana ireny.
Vavabasy maro, ary faty olona amin'arivony no efa latsaka tamin'izany.
Betsaka ny mbola tsy teraka akory na mbola zaza tamin'izany, ary nahazo tombotsoa naterak'izany taty aoriana.
Tsy mbola tanteraka araka ny ilana azy izy ireny ankehitriny, nefa kosa tsy ny aty aoriana indray no hamerina ny jadona sy ny fanampenam-bava. Aza mampitahotra amin'ny basy sy miaramila na gadra izany, fa efa betsaka no hita tamin'izany, ary tsy misy hanaiky hihemotra izany.
Aza adino fa ny fahefana mandalo, ary be no nanao azy natanjaka sy nangoron-karena teto, fa tapitra rava sy nirodona hatrany.
Aoka fotsiny samy hanaja ny lalàna velona, ary samy manao ny asany dia milamina isika.
Paul Gérard ex-DG INSTAT : Voasambotra ny namono azy
Nitafa tamin'ny mpanao gazety taty Ambanja omaly, ny lehiben'ny Fampanoavana ao amin'ny Fitsarana ambaratonga voalohany aty Ambanja.
Nambarany fa misy vokany ny ezaka fikarohana ireo nahavanon-doza namono ny Tale jeneralin'ny Ivonteram-pirenena momba ny atontanisa (INSTAT) teo aloha Ravelomanantsoa Paul Gérard.
Lehilahy efa nigadra taty Ambanja no anisany nahavanon-doza ary voasambotra. Mitohy ny fikarohana ireo namany.
Raha tsiahivina dia notafihin'ny jiolahy mitam-basy, ny alin'ny zoma 19 febroary ny tokantranon'ity DG INSTAT teo aloha ity ao Maherivaratra, Kaominina farany avaratra ato amin'ny Distrika Ambanja, manaraka ny lalam-pirenena faha-6.
jeudi, 25 février 2021 16:37
Antsiranana : Dia an-tongotra 20km no sazin’ireo tsy manao arovava orona
Miteraka resabe sy hatezerana ho an’ny ankamaroan’ny olona aty Antsiranana ny sazy ampiharina amin’ireo olona tratra tsy manao arovava orona, na manao fa tsy mametraka tsara izany amin’ny toerana tokony hisy azy fa eo ambany saoka, izay fepetra anaovana fanentanana mba hisorohana ny fihanaky ny valanaretina Covid-19.
Samborin’ny mpitandro ny filaminana avy hatrany izay tratra, ary afatratra anaty fiara dia taomina mankany Ramena na Sakaramy, lalana miazo an’i Joffre Ville ary ajanona any.
Samy manavo-tena manao izay hiverenana ao antampon-tanana izay mipetraka any. Mandeha fiara iombonana ny manambola atao saran-dalana, fa ny ankamaroany dia mandeha tongotra manala ny halaviran-dalana manodidina ny 20km.
Omaly izao dia maromaro no voasambotra, avy anefa ny orana. Hotsaka avokoa nandritra ny dia tongotra.
Nitondra fanazavana sy fanamarihana i Navony Pierre Lenoble, filohan’ny HCDDED, mikasika ny toe-draharaham-pirenena, indrindra taorian’ny zava-nitranga tamin’ny sabotsy 20 febroary 2020 teo, nikasan’ireo depiote Tiako I Madagasikara, hanao tatitra amin’ny vahoakan’Antananarivo, saingy tsy tanteraka noho ny fepetra noraisin’ny fanjakana, sy ny tsy nanomezan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny kianjan’ny Demokrasia Ambohijatovo, toerana saika hanatanterahana izany.
Nambarany fa mila akana lesona ny zava-nisy teto amin’ny firenena teo aloha. “Halaviro ny kolontsain’ny valifaty raha hitondra firenena”, hoy i Pierre Lenoble. “Tsy vahaolana ny fanagadrana lava io”, hoy ity farany.
Niantso ny mpanohitra ihany koa ny filohan’ny HCDDED mba hifanaja, tsy hanao izay hahatezitra na hanao fitaovana ny vahoaka. Ny hevitra no aoka hiady fa tsy ny olona, hoy izy.
Ny HCDDED, Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l'Etat de droit, moa dia rafim-panjakana mahaleo tena miaro ny demokrasia sy ny tany tan-dalàna.
Plus de deux ans après son arrivée au pouvoir, le président Andry Rajoelina n’a procédé à la nomination des ambassadeurs.
Cette défaillance concerne d’importantes représentations diplomatiques de Madagascar auprès des Etats-Unis, des Nations-Unies et d’Afrique du Sud notamment.
Personne ne comprend le pourquoi des tergiversations d’Antananarivo alors qu’il s’agit d’alliés de poids au niveau mondial.
L’atermoiement va à l’encontre des dispositions de l’alinéa premier de l’article 57 de la Constitution disposant que le président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres Etats et des organisations internationales.
Les dirigeants en place focalisent leur vision du développement sur le plan « Emergence » et il leur faut des appuis consistants pour sa réalisation.
jeudi, 25 février 2021 16:08
Ambatovy : Hihodina indray ity orinasa ity
Hiverina hihodina indray ny orinasa Ambatovy manomboka amin'ny volana martsa 2021 izao rehefa niato nanomboka ny volana aprily 2020.
Ny Sumitomo Corporation no tompon'ny ampahany betsaka amin’ny renivola miasa ao Ambatovy.
jeudi, 25 février 2021 10:23
Raharaham-pirenena : Mila mazava ny lalan-kizorana
Aorian'ny fifidianana, izay nahenoana ireo fampanantenana maro, ireo velirano, dia mientana ny fo sy fanahin'ny maro fa hiroso marina amin'ny fampandrosoana ny resaka.
Miazakazaka ny mpitondra voafidy mampiseho izay fahavitrihana izay.
Ny vahoaka ihany koa manome fotoana hampiaharana sy hikenokenonana momba izany. Mpitondra vao lany sy nandova ny varin'ampangon'ny teo aloha tsy lany tokoa ve tsy mba haka bahana.
Nandeha anefa ny taona, nandeha koa ny valanaretina Covid-19, toa tsy hita ihany izy izany hoy ny maro.
Mahareta kely hoy ny mpitondra fa ny firenena maro no sahirana tratran'ny valanaretina, ary mbola ao anatiny ny maro amin'izany.
Misy anefa ireo fotodrafitrasa, indrindra ny eo anivon'ny fanatanjahantena, toy ny Kianja Barea eo Mahamasina, mitentina 290miliara ariary na 77 000 000dolara, volan'ny Malagasy madiodio hoy ny mpitondra, na tsy hita anatin'ny teti-bolam-panjakana aza izany.